May 8, 2019 - CeleLove
Welcome From Cele Love
ထမင်းကြမ်း၊ ထမင်းကြော်စားတတ်သူများအတွက် သတိပြုဆင်ခြင်ဖွယ်ရာ သတင်းတစ်ပုဒ်
May 8, 2019 Cele Love 0
ထမင်းကြမ်း၊ ထမင်းကြော်စားတတ်သူများအတွက် သတိပြုဆင်ခြင်ဖွယ်ရာ သတင်းတစ်ပုဒ် ဆန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝသလို၊ ဓာတ်မတည့်တာမျိုးတွေလည်း တော်တော်ဖြစ်ခဲတဲ့အတွက် အားလုံးအဆင်ပြေပြေစားသုံးနေတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆန်ဟာ အထားအသို၊ စားသောက်ပုံ မှားသွားခဲ့ရင် တော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့ အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်နော် …။ တစ်ခါတလေ အစားမှားသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ […]
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အကြောင်း
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အကြောင်း ချစ်​သူအ​ပေါ် အနိုင်​ယူ လိုတဲ့ စိတ် ​ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်​​စေချင်​တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်​တတ် ​ကြပါတယ် …။ တနင်္ဂ​နွေ​ သားသမီး​တွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း​ပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ […]
ရန်ကုန်လေဆိပ် လေယာဉ်တစ်စီး ပြေးလမ်းချော်၍ ၃ ပိုင်းကျိုးမှု အရေးပေါ်မြင်ကွင်းများ
ရန်ကုန်လေဆိပ် လေယာဉ်တစ်စီး ပြေးလမ်းချော်၍ ၃ ပိုင်းကျိုးမှု အရေးပေါ်မြင်ကွင်းများ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လေယာဉ်တစ်စီး လမ်းချော်၊ လေယာဉ် ၃ ပိုင်းကျိုး၊ ပြေးလမ်းပိတ်ပြီး ခရီးသည်များ သောင်တင် ရန်ကုန်၊ မေ ၈ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလေကြောင်းလိုင်းမှ ခရီးသည် ၄၀ ဦးခန့်လိုက်ပါသော လေယာဉ်တစ်စီး […]
ထိုင်း အဆိုတော်အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အိမ်ဖော် သစ္စာရှိလွန်းလို့ ဘတ်ငွေ တစ်သန်း (သိန်း၄၇၀) ဆုချခံရ
ထိုင်း အဆိုတော်အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အိမ်ဖော် သစ္စာရှိလွန်းလို့ ဘတ်ငွေ တစ်သန်း (သိန်း၄၇၀) ဆုချခံရ သစ္စာရဲ့ တန်ဖိုးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိသွားတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ စိတ်ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းလေးပါနော် …။ ဆုချတဲ့ အဆိုတော်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်..။ သစ္စာရှိပြီး သိတတ်တဲ့ အိမ်ဖော်မလေးကိုလည်း ချီးကျူးဂုဏ်ယူပြီး ဝမ်းသာပီတိ […]
မင်္ဂလာဒုံ​လေယာဉ်​ကွင်းတွင်​ ​ဘင်္ဂလား​ဒေ့ရ်​ ​လေယာဉ်​ လေယာဉ်​​ပြေးလမ်း​ချော်​မှုဖြစ်ပွါးပြီး လေယာဉ်​ခါးသုံးပိုင်းကျိုးဟုကနဦးသတင်းရ
မင်္ဂလာဒုံ​လေယာဉ်​ကွင်းတွင်​ ​ဘင်္ဂလား​ဒေ့ရ်​ ​လေယာဉ်​ လေယာဉ်​​ပြေးလမ်း​ချော်​မှုဖြစ်ပွါးပြီး လေယာဉ်​ခါးသုံးပိုင်းကျိုးဟုကနဦးသတင်းရ အထူးသတင်း ရန်ကုန်လေဆိပ် ဘီမန်လေယာဉ်ပျံအဆင်းCargo Terminal နားမှာ လမ်းချော်လို့ လေယာဉ်သုံးပိုင်း ခေါက်သွာတယ် … လေယာဉ်မှုး ခေါင်းပေါက်သွားပေမယ့် ခရီးသည်တွေအန္တရာယ် မဖြစ်ဘူးလို့ကြားရပါတယ် …။ တီဂျီ ဘန်ကောက်အပြန် နဲ့ တခြားလေယာဉ်တွေပျံတက်ဖို့ လောလောဆယ် ပြေးလမ်းပိတ်နေတယ် […]
ရေဘဝဲကို အရှင်လတ်လတ် အစိမ်းစားပြတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဖြစ်ရပ်
ရေဘဝဲကို အရှင်လတ်လတ် အစိမ်းစားပြတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဖြစ်ရပ် ရေဘဝဲကို အစိမ်းစားပြနေတဲ့အချိန် ရေဘဝဲ တိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့ အမျိုးသမီး ဗီဒီယိုရဲ့ အစမှာ သူမဟာ ရေဘဝဲကို စားဖို့ ကြိုးပမ်းနေပြီး ရေဘဝဲက သူမရဲ့ မျက်နှာကို မခွာတမ်းကပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် …။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အစားစားပြပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့ […]
” သင့်ကိုယ်သင် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေလုိုက်နာရမယ့် အချက်များ “
” သင့်ကိုယ်သင် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေလုိုက်နာရမယ့် အချက်များ “ ၁။ သင့်အဆုတ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ …။ ၂။ သင့်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပဲစိမ်း စားပေးပါ။ (green beans to stop the period) ရပ်ချင်ရင်စားတာပါ …။ […]
“အချစ်ကြီးသလောက် အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး”
“အချစ်ကြီးသလောက် အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး” ဗုဒ္ဓဟူး ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အမှန်တရားကို နှစ်သက်ကြပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ရခြင်းကို မြတ်နိုးတက်ကြပါတယ် …. ။ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်လာအောင် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးတတ်ပါတယ်နော်…. ။တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းများအပေါ် နွဲ့ ဆိုး ဆိုးပေမဲ့ […]
CELELOVE provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://celelove.com/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.
Copyright © 2019 | Developed by CeleLove